“ရှုံးသူ အကုန်လုစတမ်းရဲ့ ချွတ်ခြုံကျ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး” – MC Tv Club
“ရှုံးသူ အကုန်လုစတမ်းရဲ့ ချွတ်ခြုံကျ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး”
၃၈/၃၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲအပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ သံတမန်ရေး နိုင်ငံရေးအရှုံးအမြတ်ကို ကြည့်ကြရအောင်ပါ….ဒီနေရာမှာ အကျိုးအမြတ် ရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလို့မရအောင်ကို ထိုးဆင်းသွားတဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ သံတမန်ရေး နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာ အရှုံးအမြတ်ဆိုတာနဲ့ပဲ ချိန်ထိုးရပါတော့မယ်…..
အာဆီယံကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့စဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံအတွင်း ပါစေချင် ခဲ့ကြတာ အာဆီယံ (၅) နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါတယ်….ထိုစဉ်က အာဆီယံရဲ့ အတိုင်ပင်ခံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အင်အားကြီး နိုင်ငံများရဲ့ တိုက်တွန်းမှုလည်းပါခဲ့ပါတယ်….မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းရဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက်ပါ…မြန်မာက အာဆီယံဝင်ဖို့ကို ငြင်းခဲ့ပါတယ်…. အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမယ့် နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အဆင့်မြင့် အရာရှိတွေ ရန်ကုန်လာပြီး တော်လှန်ရေး ကောင်စီကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပါတယ်…..တော်လှန်ရေးကောင်စီဖက်က အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေက လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်းခဲ့ကြပေမယ့်…. ဧည့်သည်များက မလျော့ပဲ တော်လှန်ရေးကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကို တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းပါတယ်….တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကလည်း ငြင်းဆန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်သားမို့ ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုမျိုးမလုပ်ပဲ ဂေါက်ကွင်းမှာ ဂေါက်ရိုက်ရင်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်….မှတ်သားမိသလောက် တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကို “ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးဆောင်ပြီး ဖွဲ့ပေးပါ” ဟု ဧည့်သည်က ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ထပ်မံကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်တိုင် တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌက ငြင်းခဲ့ပါတယ်…..
၁၉၉၇ မှာ မြန်မာအာဆီယံဝင်မယ်ဆိုတော့ ရှေးယခင်ကတည်းက အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် တည်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများက စိုးရိမ်စွာနဲ့ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်….သို့သော် အာဆီယံက မြန်မာကို လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေလက်ထက်မှာ မြန်မာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာပါတယ်…… “တူညီဆန္ဒအခြေပြု” သဘောထားကြောင့် မြန်မာဟာ အာဆီယံပလက်ဖောင်း ပေါ်ကနေ ကမ္ဘာကို လှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်……
၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အကြမ်းဖက်အာဏာ သိမ်းပြီးနောက် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်မှုမြှင့်တက်လာပါတယ်….. ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ ဂျာကာတာမြို့တော် အာဆီယံဌာနချုပ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကို ခေါ်တွေ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်…. ဧပြီလကုန်ကာနီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြေအနေကို သတိပြုရန် လိုပါတယ်…. ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်၊ ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ဖျက်ဆီး၊ လုယက်၊ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုပေါင်းများစွာကြောင့် မြန်မာလူထုတန်ပြန်ခုခံမှု စတင်နေ ချိန်ဖြစ်ပါတယ်…..အာဆီယံက နိုင်ငံတကာရဲ့ သဘောထားကိုပါ ထင်ဟပ်စေတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ အာဆီယံရဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက်ကို အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ပူးပေါင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်…..
အာဆီယံရဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက်မှာ မြန်မာလူထုရဲ့ ပကတိခံစားနေရတဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ မပါဝင်တော့ပဲ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရလို့ အထူးသဖြင့် မြန်မာလူထုက အာဆီယံအပေါ် ယုံကြည်မှု အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်….အမှန်က Joint Communique လို့ခေါ်တဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်ကို မြန်မာက “တူညီဆန္ဒအခြေခံမူ” ကြောင့် စာသားတွေကို ဝင်ပြင်ခွင့် ရှိနေခဲ့လို့ပါ….၃၈/၃၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာစစ်ဖက်လည်း မပါရော အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်မှာ ဧပြီလ အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက်ကို ပြန်ပြောင်း ရည်ညွှန်းခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရ ထိန်းသိမ်းထားသူများကို လွှတ်ပေး ရမယ်ဆိုတာ အတိအလင်းဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်…….ရှုံးသူ အကုန်လုစတမ်းမူကို ကိုင်စွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်သူ၊
အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းရန် မြှောက်ပင့်ပေးခဲ့သူ အရှက်မဲ့ စစ်အကြမ်းဖက် နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ယူ အမည်ခံထားသူရဲ့ ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ သံတမန်ရေး အခင်းအကျင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ရှေးက မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ကြိုးပမ်းခဲ့ မှုများကိုပါ ခြေနဲ့နင်းဖျက်တဲ့ အာဆီယံနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ဦးနှောက်မဲ့ တုန့်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ အနှစ်သာရ ထွက်လာပါတော့တယ်…….မစမ်းနဲ့ မရဘူး လဘက်ရည်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးတဲ့….
Previous Article သုံးလကျော်ကြာပိတ်ထားတဲ့ ယုဇနပလာဇာစျေးပြန်ဖွင့်ချိန် အပေါ်ထပ်ကားပါကင်မှာ နစက တပ်တွေ တပ်စွဲထားလို့ ဈေးသည်တွေ စိုးရိမ်နေ